ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့ မြန်မာပြည် ခရီး(၂)
acebook ပေါ်က လက်ရှိ ကိုမိုးသီးဇွန် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် ဆောင်းပါးတွေကို စောင့်ဖတ်ပြီး ဆဲနေတဲ့ သူတွေကို သေချာကြည့်လိုက်တော့ အများစုက နိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? ဆိုတာကို ကျမစဉ်းစားလို့ ခက်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ facebook ထဲက နိုင်ငံခြားမှာနေနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောတယ်၊ သူတို့ အထိနာသွားတာတဲ့…။ ဘာကို အထိနာသွားတာလဲ …ဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျမကိုယ်တိုင်ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အထိနာစေဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျမ မြင်တာကိုပဲ ချရေးခဲ့တာ။ မြင်တာချရေးရုံနဲ့ အထိနာသွားတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲ….ဒါလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 20:10 No comments:
တရုတ် သဘောထား ပြောင်းလဲနေသလား
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရေးကို တရုတ်က အဓိကထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးမှာ အပြန်အလှန် မှီခိုကြပါတယ်။ တရုတ်ကလည်း အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့  ယုံကြည်မှုရရှိအောင် အထူးကြိုးပမ်းပါတယ်။ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးမှာတော့ နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကို အဓိကထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိရည်မှန်းချက် မအောင်မြင်တဲ့အခါမှာတော့ တရုတ်ဖက်က အကျပ်ကိုင်ဖိအားပေးတာမျိုးတွေ လုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်မြို့နယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၄ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ကျောချောင်း ၊ ကမ်းပါးဖြူ လှေဆိပ်မှ အခြားတစ်ဖက်သို့ ဖြတ်ကူးသည့် ကူးတို့လှေတစ်စီး တိမ်းမှောက် မှုကြောင့် လှေပေါ်ပါသူ ခရီးသည် ၄၁ ဦးအနက် ၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
ပြည်တော်ပြန်မိုးသီးဇွန်တို့ အဖွဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ၊ မန္တလေးတိုင်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့သို့ သွားရောက်မည်ဟုသိရ
စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်တော်ပြန်မိုးသီးဇွန်တို့ အဖွဲ့ သည် လူထု အကူအညီပေးမှု လုပ်ငန်း များလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဧရာဝတီတိုင်း ၊ မန္တလေးတိုင်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့သို့ သွားရောက် မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နှင့်စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့်တွေ့ ဆုံမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါခရီးစဉ်အားလုံး ၌ကိုမိုးသီးဇွန်အပါအ၀င်ကို ထွန်းအောင်ေ ကျာ်၊ဦးကိုကိုအောင်၊ ဦးကိုကိုလေး ၊ ဦးမူးသာ၊ ကိုရင်အေးနှင့်ကိုရွှေဇင်ထွန်းတို့လိုက်ပါ မည်ဟု ယူဆရကြောင်း ကိုမိုးသီးဇွန်၏လုံခြုံရေး တာဝန်ခံဦးရဲမင်းထံမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရေး သမားအချို့  အမေရိကန်မှာလေ့လာ
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်ထောင်စုစနစ် အုပ်ချုပ်ပုံကို မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြန်အသုံးချနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတတွေ ရခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ မဲ ဆွယ်ပွဲမှာ Facebook အရေးပါလာ
Flower News အယ်ဒီတာကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က တရားစွဲဆိုမှုအား ခရိုင်မှ ထပ်မံပလပ်
သတင်းရေးသားဖော်ပြရာတွင် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေသည့် ရေးသားချက်များအား ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးထားသည်ဟုဆိုကာ ပုသိမ်မြို့ရှိ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးမှ Flower News အယ်ဒီတာဦးကျော်စွာမင်းအား တရားစွဲဆိုထားမှုကို ပုသိမ်ခရိုင်တရားလွှတ်တော်မှ ထပ်မံ ပလပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်း၌ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် KIA စစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားလျှက် ရှိကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရှိရသည်။
“(၆) ရက်နေ့ ညနေ (၆) နာရီ ၀န်းကျင်လောက်ကစပြီး မော်ဟန်ကျေးရွာနဲ့ (၂)မိုင်အကွာလောက်မှာ အစိုးရ စစ်တပ်တွေနဲ့ KIA စစ်တပ်တွေ တိုက်နေကြတာ။ ညရောက်တဲ့အထိ ပစ်ခတ်သံတွေ ကြားနေရတုန်းပဲ” ဟု မော်ဟန်ကျေးရွာမှ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အီရန်သံတမန်များ ကနေဒါနိုင်ငံမှ ၅ရက်အတွင်းထွက်ခွာရမည်
ကနေဒါနိုင်ငံသည် အီရန်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်သွယ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက် ကနေဒါနိုင်ငံအတွင်းရှိ အီရန်သံတမန်ဝန်ထမ်းများနိုင်ငံအတွင်းမှ ၅ရက်အတွင်းထွက်ခွာကြရန်ကြေညာလိုက်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံရေးဝန်ကြီး John BairdJohn Baird သည် " အီရန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းကိုခြိမ်းချောက် မှုသိသာထင်ရှားလာပြီး၊ ကမ္ဘာ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်သည်ဖြစ်၍ ယ္ခလို သံတမန်ဖြတ် ရကြောင်း သောကြာနေ့ကထုတ်ဖေါ်ပြောလိုက်သည်။
ယာဉ်မယ် - အမျိုးသမီးတို့အတွက် အခွင့်အလမ်း
ယာဉ်မယ် သို့မဟုတ် အဝေးပြေးကားတွေထဲ ခရီးသည် ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများပြားလာနေပြီး ကားလိုင်းတွေများလည်း ယာဉ်မယ်ခန့်ထားမှုနှုန်းတိုးလာပါပြီ။
ဂျီးမေးလ်အကောင့်ကို အလွယ်တကူ ဟက် (ခိုး)နည်း နှင့် ကာကွယ်နည်း
စာဖတ်သူတို့ကို မျှဝေလိုသည့် ဆန္ဒကြောင့် စမ်းသပ်ရင်း၊ စမ်းသပ်ရင်းနဲ့ စာရေးသူ မောင်အောင်ခမ်းလည်း အပျော်တန်း ဟက်ကာတစ်ယောက် အလား ဖြစ်နေရပါပြီ။ အစောက ဂျီတော့အကောင့် သုံးခုတိတိ ဟက်လို့ အောင်မြင်သွားပါတယ်။
ဘာ ဆော့ဖ်ဝဲမှမသုံးပါဘူး။ ဆော့ဖ်ဝဲမသုံးပဲ ဟက်တာတောင် ဒီလောက် လွယ်တာ ဆော့ဖ်ဝဲသာသုံးရင် ဟက်ကာပဲ လုပ်စားရတော့မယ့် ကိန်းဆိုက်ပါ တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို တောင်းပန်ပြီး ဟက်ထား တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူတို့အကောင့်တွေကို စမ်းသပ်ရန် ယာယီအသုံးပြု ချင်းမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 10:11 1 comment:
"အနှစ်(၂၀) မျှ တော်ရာလှန် လုပ်စားလာပြီးနောက်
ဆဲလ်ဖုန်း (မိုဘိုင်းဖုန်း)ကို အိပ်ယာဘေးထားမအိပ်သင့်ပါဘူး။ ဖုန်းကထွက်လာတဲ့ ရေဒီယိုလိုင်းများက ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အကျိုးဆက်များကတော့-
မန္တလေးမြို့ရှိ WIFI FREE သုံးစွဲနိူင်သော လဘက်ရည်ဆိုင်၊ကော်ဖီဆိုင်များ
ကရဝိတ် ကဖေး(နေ့ပိုင်း) ၂၂လမ်း၊၈၃×၈၄လမ်းကြား
ကရဝိတ်ကဖေး(ညပိုင်း) ၃၅လမ်း၊ ၇၄×၇၅လမ်းကြား
ချစ်ညီလေး ၃၂လမ်း၊ ၇၆×၇၇လမ်းကြား
ရှဲဒိုး ၃၂×၃၃ ၈၇လမ်း
good morning 30×82×83ကြား
စိန်ဝင်းဝင်း ၃၄ လမ်း ၈၄x ၈၅ကြား
ကဖေးဘလူး ၂၉-၆၃ ဒေါင့်
ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော မြန်မာနိုင်ငံပြန်ခွင့်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာ၍ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ဖူးမျှော်လိုသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသော ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာရန် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီး ပြန်လာပါကကြိုဆိုပါကြောင်း ၎င်း၏မိသားစု ကိုအကြောင်း ပြန်ကြားထားသည် ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက The Voice Weekly ၏မေး
မြန်းချက်ကို ပြန်လည်ဖြေကြား သည်။
~ မင်္ဂလာနံနက်ခင်း ~
လုံ့လလည်းရှိ၊ သတိလည်းရှိ၊ အပြစ်ကင်းသော အလုပ်ကိုလည်း ပြုလုပ်တတ်၏။ အမှုကိစ္စဟူသမျှကို ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်၍ ပြုလုပ်လေ့လည်းရှိ၏။ ကိုယ် နှုတ် စိတ် သုံးပါးကိုလည်း စောင့်စည်းလေ့ရှိ၏။ တရားသဖြင့် အသက်မွေးလေ့လည်းရှိ၍ မမေ့မလျော့သော သူမှာ စည်းစိမ်ဥစ္စာ အရာအထူး ကျေးဇူးသတင်း ကျော်စောခြင်းသည် တိုးပွား၏။
( ဓမ္မပဒ )
ပြည်တော်ပြန်မိုးသီးဇွန်တို့ အဖွဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ၊ မ...
Flower News အယ်ဒီတာကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က တရ...
ဂျီးမေးလ်အကောင့်ကို အလွယ်တကူ ဟက် (ခိုး)နည်း နှင့် ...
မန္တလေးမြို့ရှိ WIFI FREE သုံးစွဲနိူင်သော လဘက်ရည်ဆိ...
ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော မြန်မာန...